Fedora yakaziviswa se "dhijitari yeruzhinji yakanaka" neDPGA | Linux Vakapindwa muropa
Pakati peanoshanda masystem ane makuru mavhezheni anoshandisa GNOME, 3 anomira kunze: Debian, Ubuntu uye Fedora. Kune avo vatatu, iyo chete inoita kunge isingazeze kana zvasvika pakuwedzera nhau dzichangoburwa ndeyekupedzisira, uye kana zvisiri, bvunza GNOME 40, desktop iyo haina kuiswa mukati mira ne kune protagonist yenyaya ino uye hongu kune vamwe vese. Chirongwa chega chega chine huzivi hwakasiyana, uye hwe Fedora yakashanda kuhwina mubairo, uyo unoiona se "yakanaka yeruzhinji."
Kupfuura mubairo, iko kucherechedzwa kunopihwa neDigital Public Goods Alliance (DGPA), boka rekuronga pasi peamburera yeUNICEF rakagadzirirwa kusimudzira budiriro inoenderera kuburikidza nemhinduro dzakavhurika sosi dzinopa nyika inoenzanirana. Pane zvikonzero zvinoverengeka nei Fedora aive yakazivisa kunaka kweruzhinji, uye mazhinji acho anogona kuiswa kune mamwe maLinux kugoverwa, asi kwave kuri kugoverwa kune zita reheti iyo yakatungamira nzira.
"Fedora inosimudzira maitiro akanakisa uye inotevedzera zviyero"
Kuti uzivikanwe neDPGA sechakanaka paruzhinji unofanirwa kushandisa yakavhurika kodhi, dhata, mhando dzekuchenjera dzekunyepedzera, zviyero uye zvemukati. Iyo zvikonzero izvo Fedora yakazivikanwa nenzira iyi ndeiyi:
Kurudzira zvakanakisa maitiro uye kutevedzera zviyero.
Iyo inogadzira inovandudza chikuva chehardware, makore, uye midziyo inogonesa vanogadzira software uye nhengo dzemunharaunda kugadzira zvigadziriso zvakagadzirwa kune avo vashandisi.
Iyo yemahara uye inouya nemvumo yekushandisa, kuteedzera, kugadzirisa, kusanganisa, kushambadzira, kugovera, sublicense uye / kana kutengesa makopi esoftware pasina zvirambidzo kunze kwekupa mvumo imwechete kune chero munhu anoshandisa zvigadzirwa zvinoguma.
Remekedza zvakavanzika uye mimwewo inoshanda yenyika uye yepasi rose mitemo.
Goverana ruzivo rwemunhu nenzira shoma uye inozivikanwa.
Izvo hazvikonzere chero kukuvara.
Tevedza gwara remitemo yekuvanzika uye ita kuti gwara rekuvanzika riwanikwe kune vanobatirana.
Sekureva kweDGPA, ivo vakapa Fedora nekuti inovavarira kugadzira nyika yakaenzana. Kana iwe uchifarira kuona chimwe cheicho icho DGPA inotora sedigital zvigadzirwa zvevanhu, iwe chete unofanirwa kuwana kunyoresa kwako (kuburikidza network).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora yakaziviswa se "dhijitari yeruzhinji yakanaka" neDPGA
Zvakanaka, makorokoto kuchikwata che f dora, ndinacho muchikwata changu asi ndinofunga kuti pane zvinhu zvakawedzeredzwa zvandakaona kuti nhau dzemanyoka dzinoiswa pakutanga mumanajaro, haisi yekuidzivirira asi ndinofunga kuti fedora rava rinorema uye zviwanikwa zvine nzara
Pamavhareji zvikwata ane makore matanhatu ekuberekwa kana mashoma, iri imwe nzira inokwezva. Kunyangwe iwe uchida Debian, fedora ine zvinyorwa zvechangobva kuitika software, kwete yakawanda seDebian, asi shanduro dzakagadziridzwa. Uye fedora kutenderera senge jamu, dzimwe nzira dzakanaka kune liveusb. Zvinonzwisa tsitsi kuti SSD yangu idiki uye handikwanise kuva zvese, kuti ndiongorore kwazvo. Ini ndiri mutsigiri wekuve neiyo distro yakafanana pamakomputa angu ese, uye sekureva kwaAnteodt6, fedora inogona kunge isingakodzere zvakanaka pane mashoma Hardware. Uye sinamoni yakanaka kwazvo, zvakare inowirirana ne gnome.